जनतापाटी मंगलवार, असार १६, २०७७, ०७:२१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कृषि मन्त्रालय र नापी शाखाको स्रोत दिएर केही सञ्चार माध्यममा आएको नेपाल–चीन सीमा समस्या बारेको समाचार सत्य नभएको बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले सम्बन्धित मन्त्रालयले समाचारबारे खण्डन गरिसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रस्ट पार्ने काम भइसकेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले नेपालको भूमि चीनबाट कहीँकतै नमिचिएको जानकारी गराउनुभयो । नेपाल–चीनबीच निरन्तर परस्पर कुराकानी भइरहेकाले भ्रामक समाचारमा नपर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
“कसरी यी प्रायोजित खालका समाचार प्रकाशित भए ? कहाँ, कुन कारखानामा उत्पादन भए ? समाचारले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ, स्रोत खोजी गरिरहेका छौँ”, मन्त्री ज्ञवालीले थप्नुभयो, “हाम्रा सम्बन्ध पूर्ववत् नै छन्, गलत सूचनाले दिग्भ्रमित पार्छ ।” नेपाली मिडिया अझै व्यावसायिक बन्ने अभ्यासमा रहेकाले त्रुटि हुने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “मिडियामा आएका समाचार ‘भेरिफाई’ गरेर मात्र माननीय सदस्यहरूले बोलिदिनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय सभा ‘परिपक्वहरूको सभा’ भएको उहाँले बताउनुभयो । कहिलेकाहीँ ‘स्वार्थ’ हावी हुँदा गलत सूचना आउने गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ‘विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा’ असाध्य संवेदनशील विषय भएकाले सूचनालाई ‘पुनर्पुष्टि’ गरेर बोलिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
सीमा सङ्केत चिह्न ३७ र ३८ भौगोलिक दुर्गमताका कारण बनाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । गोरखाको सामा गाउँ र चीनको रुई गाउँमा परम्परादेखि लेनदेन कारोबार भइरहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले स्थानीयको स्वेच्छाले सामा गाउँ र रुईमा बसोवास भइरहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले पत्रिका पढेर संसद् बैठकमा धारणा नराख्न सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले गोरखा, दार्चुला, हुम्ला, सङ्खुवासभा, दोलखाका केही नेपाली भूमि चीनले अतिक्रमण गरेको समाचार आइरहेको बताउनुभएको थियो । सांसद प्रकाश पन्थले प्रोटोकलको बैठक नियमित बस्न नसकेकाले त्यसबारे जानकारी दिन मन्त्रीसँग माग गर्नुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
चाडपर्वकाे अवसरमा विदेशबाट आठ अर्बको सवारीसाधन भित्रिए बिहिवार, आश्विन २५, २०७५, १५:१३:००
संघीयता कार्यान्वयनमा सत्ता र विपक्षसँगै हिड्नुपर्छः नेता सिटौला बुधवार, बैशाख २५, २०७६, २१:१५:००
वीरगञ्जमा उपचाररत चार जनाको चौथो रिपोर्ट पनि नेगेटिभ, डिस्चार्जको तयारी शनिवार, बैशाख १३, २०७७, १९:५३:००